HAIADY BOXE CHINOISE :: Niakaran’i Jean Christian fanintsiviny ny tendron’izao tontolo izao • AoRaha
HAIADY BOXE CHINOISE Niakaran’i Jean Christian fanintsiviny ny tendron’izao tontolo izao
Anaram-boninahitra iray sy fehinkibo iraisam-pirenena iray no azon’i Jean Christian Randriamalaza, tany Carrera, Italie, nandritra ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ho an’ny haiady Boxe chinoise. Resiny teo amin’ny sokajy latsaky ny 70 kg full kick i J-Boy, avy any Polinezia ka nahazoany izany anaram-boninahitra izany.
Tompondaka eran-tany eo amin’ny Boxe Thaï ity teratany polinezianina ity. Lavony teo amin’ny sokajy maherin’ny 71 kg K1 kosa ilay teratany ejyptiana, Abdar Mohamed, ka nahazoany ny fehinkibo iraisam-pirenena.
Fanintsiviny tamin’ity andiany fahasivy ity no naha tompondaka eran-tany an’i Jean Christian Randriamalaza teo amin’ny full kick boxe lei-tei na ny boxe chinoise, nokarakarain’ny fikambanana maneran-tany ho an’ny kickboxing nentin-drazana (WTKA). Nahavory mpikatroka manodidina ny dimy arivo avy amin’ireo firenena fito amby zato ity fifaninanana maneran-tany ity. Maherin’ny valo amby roapolo ihany koa ireo federasionana haiady tonga tany Carrera, Italia.
HANDBALL – FIFANINANAM-PIRENENA :: Naongan’ny Cosfa sy THBC ireo tompondaka farany